दसैँमा कस्तो खसीको मासु खाने ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य दसैँमा कस्तो खसीको मासु खाने ?
दसैँमा कस्तो खसीको मासु खाने ?
२०७४, ७ आश्विन शनिबार १७:३२
डा. केदार कार्की पशु चिकित्सक
दसैँमा खसी–बोका तथा च्यांग्रा खरिद गर्ने तयारीमा पक्कै हुनुहोला । तर, खसी–बोका किन्दै गर्दा केही कुरामा भने सजगता अपनाउनुपर्छ । ग्रामीण भेगमा त दसैँलाई भनेर केही समयपहिलेदेखि नै बोका पालेर राखिएको हुन्छ । तर, सहरी क्षेत्रका बासिन्दाले खसी–बोका किन्दा विशेष सजग हुनुपर्छ ।
मोटोपन राम्रो होइन । मोटोपनले शरीर रोगी बनाएको हुन्छ । त्यसैले मोटा खसी–बोकाको मासु खानु दुई कारणले हानिकारक हुन्छ । मोटा खसीबोका रोगी हुने भएकाले रोगी मासुले फाइदा गर्दैन । बोसोले पनि असर गर्छ । बोसोपन बोकामा भन्दा खसीमा बढी हुन्छ । बोसो स्याचुरेटेड फ्याटी एसिड हो । यसले कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउँछ । मुटुसम्बन्धी रोग भएकालाई झनै हानिकारक हुन्छ । त्यसैले खसी किन्दा सकेसम्म दुब्लो नै किन्नुहोस् ।
खसी किन्दा उसको भुँडीमा ध्यान दिनुपर्छ । भुँडी झरेको खसी रोगी हुन सक्छ । भुँडी झोलिएको खसीमा जुका पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । जुका परेको खसीको मासु खाएमा जुका हाम्रो पेटबाट दिमागसम्म पुग्ने खतरा रहन्छ । मोटोपनले पनि भुँडी झरेको हुन्छ ।
खसी र बोका किन्दा उमेरमा ध्यान दिन सकियो भने पनि ठूलो फाइदा हुन्छ । खसी र बोका खाने उत्तम उमेर फरक–फरक हुन्छ । अन्दाजी आठ महिनादेखि एक वर्षसम्म उमेरको बोकाको मासु स्वस्थकर हुन्छ । यसमा बोसोको मात्रा तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । यसैगरी, खसी कलिलोभन्दा छिप्पिएकै खानु ठीक हुन्छ । छिप्पिएको खसीको मासुमा फ्याट कन्टेन्ट तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ ।
खसीको शारीरिक अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । किन्न आँटेको खसी–बोकालाई बाँधेको ठाउँबाट फुकाउनुहोस् र हल्का धपाएजस्तो गरेर हिँड्न लगाउनुहोस् । लोसे खालको हिँडाइ तथा गतिविधि देखायो भने पूर्ण स्वस्थ नभएको बुझ्नुपर्छ । फुर्तिलो, छुँदा बुरुक्क उफ्रिने, चलमलाउने हुनुपर्छ ।
आँखामा चिप्रा आएको, नाकबाट सिंगान बगिरहेको खसी–बोका किन्नेतिर लाग्दै नलाग्नुहोस् । त्यसैगरी रौँ झुस्स भएको खसी पनि स्वस्थ हुँदैन । उसको थलोतिर पनि नियाल्नुहोस् । गोटा परेको जुत्तो गरेको छ भने निरोगी भएको बुझ्नुपर्छ । पुच्छर आसपासमा छेरेको लतपतिएको देखिएमा खसी–बोका रोगी छ भन्ने जान्नुपर्छ । यस्तालाई जुका परेको हुन सक्छ ।
Next articleम्याग्दीकी प्रशंसा श्रेष्ठलाई मिस पपुलारिटी टाईटल